Nyamavhuvhu 2020 - Peji 2
Vaviri vatsva uye varipo vanyori veNetflix vanozokodzera kuita chibvumirano. Izvo iwe zvaunoda kuti uzire Rondedzero yeiyo nyowani Chromecast neGoogle TV yakaonekwa paCanada Google Chitoro. Rondedzero yacho inoratidza vatengi muCanada vanowana mwedzi mitanhatu yeNetflix neChromecast nyowani. Chromecast ine Google TV ichavhurwa padivi peNest Audio smart… [Verenga zvakawanda ...] nezveGoogle Chromecast nyowani inouya nemwedzi mitanhatu yeNetflix muCanada
Ultra Pfupi Kukanda (UST) mapurojekita inzira yakanaka yekuwana chiwoniso chakakura mukamuri diki. Zvese zvaunoita kuisa UST projekita masendimita kubva pamadziro uye ndokudaidza zuva. Asi ivo tekinoroji nyowani inodhura, seuchapupu hweSamsung Premiere Projector. Iyo inouya mumhando mbiri, iyo LSP7T ye $ 3,499.99 uye iyo LSP9T $ 6,499.99. Uye unogona kuzvitenga izvozvi. Ultra Pfupi Kukanda… [Verenga zvakawanda ...] nezve Iwe Unogona Ikozvino Kutenga Samsung's Killer Nyowani Ultra Pfupi Kukanda Projekita
Kiredhiti: Google Google iri kuwedzera isingagumi Sangana nemavhidhiyo mafoni evashandisi veGmail kusvika Kurume 31, 2021. Iyo perk yakatanga kugadzirirwa kupera musi waGunyana 30. Google iri kubvuma chokwadi cheakawedzera COVID-19 denda. Google isingagumi yemahara Sangana nevhidhiyo kufona maakaundi eGmail inogara kwemwedzi yakati wandei kwenguva yakareba. Anotanga internet akawedzera (kuburikidza neNeowin)… [Verenga zvakawanda ...] nezveGoogle inowedzera isingagumi Meet mafoni evashandisi veGmail kuburikidza munaKurume 2021
Enda kune peji 140